सरकार किन सुन्दैन, मुख्यमन्त्रीलाई याैन हिंसाकाे अाराेप लाग्दा पनि ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	सरकार किन सुन्दैन, मुख्यमन्त्रीलाई याैन हिंसाकाे अाराेप लाग्दा पनि ! » Nepal Fusion
सरकार किन सुन्दैन, मुख्यमन्त्रीलाई याैन हिंसाकाे अाराेप लाग्दा पनि !
हाल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता शेरधन राईलाई आफ्नै पार्टीकी एक नेतृका सम्वेदनशील अंगमा समाएर (छोए) यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
मुख्यमन्त्री राईलाई उनकै पार्टीकी एकजना चर्चित नेतृले यौन हिंसाको आरोप लगाएकी हुन् । तत्कालीन एमालेको युवा संघ नेपालकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य बालिका खड्काले राईलाई यौन हिंसाको आरोप लगाएकी छिन् । बालिका खड्काको आरोपले तरंग उत्पन्न भएको छ । शेरधन राईले बालिका खड्कालाई प्रहरी बोलाएर थुनाएको समेत रहस्य बाहिर आएको छ ।
‘नेपाल आज’ नामक युट्युब च्यानलसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा बालिका खड्काले मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई यौन हिंसा गरेको बताइन् । उनी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सचिवालयको अधिकृत भएर काम समेत गरेको बताएकी छिन् ।
बालिका खड्काले राईले आफूलाई गरेको यौन हिंसाबारे उजुरी दिएको बताएकी छिन् । उजुरी गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट जागिरबाट हटाएको बालिका खड्काले बताएकी छिन् । त्यसपछि आफूलाई युवासंघको केन्द्रीय सदस्य पदबाटै हटाएको पनि उनले बताएकी छिन् ।
विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दोस्रो पटक जिम्मेवारी लिँदै गर्दा शीतलनिवासमै मुख्यमन्त्री राईले आफ्ना सम्वेदनशील अंगमा छोएको उनले दाबी गरेकी छिन् । मुख्यमन्त्री राईले यसबारेमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।